Vietjet: Ny sidina famerenana amin'ny laoniny dia manokatra ny lalana hamerenana indray ny serivisy iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Vietjet: Ny sidina famerenana an-tanindrazana dia manokatra ny lalana hamerenana ny serivisy iraisam-pirenena
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Vietjet: Ny sidina famerenana an-tanindrazana dia manokatra ny lalana hamerenana ny serivisy iraisam-pirenena
Jolay 20, 2020
Manaraka ny fitarihan'ny governemanta Vietnamese, Vietjet dia niara-niasa tamin'ny maso ivoho Vietnamese mifandraika amin'ny firenena sy any ampitan-dranomasina mba hitondra ny olom-pirenena Vietnamita hody amin'ny valin'ny fanirian'ny olom-pirenena ary mifanaraka amin'ny fahaizan'ny firenena.
Tamin'ny 18 jolay, i Vietnam dia nanao sidina iraisam-pirenena nitondra olom-pirenena Vietnamese miisa 240 avy any Filipina nody soa aman-tsara. Niala tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Ninoy Aquino ny sidina ary tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Can Tho any atsimon'i Vietnam ho an'ny karazan-karenan'ny 14 andro. Tamin'ny volana jolay, i Vietjet dia nampandeha sidina fampodiana telo hafa avy any Singapore, Taiwan, Sri Lanka ary Bangladesh. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia antenaina fa hampandeha sidina efatra fanampiny hitondra olom-pirenena Vietnamianina maro kokoa avy any Filipina, Russia, Brunei, Indonesia ary Myanmar hody ato ho ato.
Ireo mpandeha amin'ny sidina an-tanindrazana dia voasokajy ao amin'ny vondrona laharam-pahamehana, ao anatin'izany ny zaza latsaky ny 18 taona, ny be antitra, ny vehivavy bevohoka, ny olona manana olana ara-pahasalamana, ny mpiasa manana fifanarahana asa efa lany daty ary tsy misy trano onenana, mpianatra tsy manana trano noho ny famoahana ny trano fatoriana sy ireo toe-javatra sarotra manokana.
Manantena i Vietnam fa hitondra olom-pirenena vietnamiana manodidina ny 10,000 any ivelany any an-tanindrazana amin'ny faran'ny volana jolay, amin'ny fanajana tanteraka ny fepetra takiana amin'ny fidirana sy ny karokeranina rehefa tonga. Ny sidina Vietjet rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra avo indrindra sy ny tolo-kevitra avy amin'ny manampahefana, ny World Health Organization (WHO) ary ny International Air Transport Association (IATA) mba hiantohana ny fiarovana ny mpandeha sy ny ekipa rehetra alohan'ny, mandritra sy aorian'ny sidina.
Amin'ny dingana voalohan'ny Covid-19 nipoaka, namoaka fanentanana haingana i Vietnam ho fampodiana ireo mpandeha tamin'ny sidina maimaim-poana maro sy sidina sambo tokana hitondrana ireo teratany Vietnamianina sy vahiny hody. Ny mpandeha rehetra, ny ekipan'ny kabine, ny fiara ary ny fiaramanidina dia azo antoka tanteraka. Ankoatr'izay, Vietnam dia nitondra entana tena ilaina an'arivony taonina, fitaovana fitsaboana. Nanolotra sarontava fitsaboana maherin'ny 2.5 tapitrisa ho an'ny mponina any Angletera, Frantsa, Alemana ary Etazonia koa ilay mpitatitra mba hanohanana ireo firenena amin'ny fisorohana sy ny famelezana ny valanaretina COVID-19.
Miorina amin'ny valin'ny sidina fampodiana an-tanindrazana, Vietnamjet dia hanohy hiara-miasa akaiky amin'ireo manampahefana sy ny governemanta hanitsy ny zotram-piaramanidina mifanaraka amin'ny tena zava-misy; mampitombo ny sidina an-tanindrazana sy ny sidina ara-barotra hitondra ny olom-pirenena Vietnamianina hody. Amin'izao fotoana izao dia nahavita ny fanomanana mialoha ny seranam-piaramanidina hamerenana ny sidina iraisam-pirenena ary miandry ny fankatoavana ofisialy avy amin'ny governemanta.